Epic sarobidy | Coinfalls Casino
Miaraka amin'ity lalao scratchcard, mpilalao dia mba tsindrio eo amin'ny 40 vatosoa izay hitany eo amin'ny an-trano efijery. Rehefa avy tsindrio ny bokotra kilalao, anao sy tsindrio eo amin'ny vatosoa tsirairay mba hahita izay samy manana ny mpilalao. Misy 4 toeram-pitrandrahana izay miafina tsapaka ao amin'ny vatosoa; raha mpilalao avy eo tsindrio eo amin'ny azy avy hatrany ny lalao mety ho levona. Etsy ankilany, raha mpilalao tsindrio eo amin'ny amin'ny 36 vatosoa tsy fipihana eo amin'ny toeram-pitrandrahana ny mpilalao avy eo dia homena Fandresena.
Ny tena gameplay ny ity lalao ity miankina amin'ny vatosoa izay tsindrio. Izy io dia fahafahana ara lalao izay miankina amin'ny vintana, ka ho azo antoka anao tsindrio diamondra rehetra amin'ny fara herintsika miahy misy ny sasany izay mety hamarana ny lalao ho anao. Misy 40 vatosoa teo amin'ny efijery sy ny mpilalao tsy maintsy tsindrio eo amin'ny tsirairay mba hahita izay ny vatosoa dia manana ho azy ireo ao amin'ny Epic vatosoa scratchcard lalao.
Momba ny developer ny Epic vatosoa
Epic vatosoa no novolavolaina ny Gamevy izay iray amin'ireo mpitarika lalao developer ao amin'ny iGaming orinasa, dia mamorona lalao amin'ny kalitao ary ny fahazoan-dalana izay miteraka toetra mpamatsy Casino lalao ho an'ny mpilalao ho tia.
Ahoana no milalao? More ny lalao
Misy fitsipika sasantsasany izay mpilalao mila foana ao an-tsaina rehefa milalao Epic vatosoa:
Alohan'ny manomboka ny lalao, aloha ny mpilalao mila hametraka ny Bet. Ny Bet habe amin'ny hatraiza lehibe iray manapa-kevitra ny fandresena ny mpilalao vola noho izany mila mifidy ny tsara indrindra vola amim-pahendrena.
Teo amin'ny efijery, ny jackpot vola ho aseho, fa jackpot vola dia ny habetsahan'ny mpilalao dia afaka mandresy ny loka izay mametraka
Misy 40 vatosoa fa ny mpilalao dia tsy maintsy miatrika sy 4 toeram-pitrandrahana.
Ny vatosoa gropy dia izay no haneho ny vatosoa ianao raha voakitika dia vatosoa na ahy. Raha ny mpilalao kitika farany tao amin'i ny vatosoa fa dia hanjavona fa raha kitika farany tao amin'i ny ahy fa dia hifarana ny lalao manontolo.
Ao amin'ity lalao scratchcard, ny mpilalao dia manana ny safidy ny vola avy ny winnings amin'ny fotoana rehetra. Izany dia mahaliana lalao izay manasongadina ny fandresena vetivety gameplay ho an'ny mpilalao handresy bebe kokoa.
Handalina any Epic vatosoa amin'ny Coinfalls Casino ka jereo izay hevitry ny teny Casino lalao dia manana ho anao. Mandehana mialoha ary milalao ity lalao Casino amin'izao fotoana izao!